﻿ किन आत्महत्या गर्दैछन् फ्रान्समा प्रहरीहरु ?
किन आत्महत्या गर्दैछन् फ्रान्समा प्रहरीहरु ?
सोमबार २७, असोज २०७६
पेरिस । फ्रान्समा प्रहरीहरुले आत्महत्या गर्ने क्रम बढ्दो छ । केही समय अघि तीन जना दंगा प्रहरी, एक जना प्रहरी कमान्डर र एक प्रहरी एकेडेमीका शिक्षकसहित आठजना प्रहरी अधिकारीले आत्महत्या गरे । यससँगै सन् २०१९ मा आत्महत्या गर्ने प्रहरीको संख्या ६४ पुगेको छ र दिनानुदिन यो क्रम बढ्दो छ ।
ड्युटीका क्रममा मृत्यु हुने प्रहरीको संख्याभन्दा आत्महत्याबाट ज्यान गुमाउने प्रहरीको संख्या बढ्दो क्रममा छ ।
यसरी आत्महत्या गर्न प्रहरीमा फ्रान्सका सबै ठाउँबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् र सबै उमेरसमूहका छन् । जसमा विवाह भएर बच्चा भइसकेका प्रहरी अधिकारी छन् । पछिल्लो समय बुधबार आत्महत्या गर्नेमा दक्षिणपूर्वी फ्रान्सस्थित एर्डेक क्षेत्रका हुन् । किन यसरी प्रहरीहरुले आत्महत्या गरिरहेका छन् भन्‍ने प्रश्नको जवाफमा प्रहरी युनियनले ‘शान्ति व्यवस्था कायम गर्न कठिन’ भएको बताएको छ भने फ्रान्स अधिकारीहरुले यसको जवाफ दिन सकेका छैनन् ।
जुलाईमा सार्वजनिक गरिएको संसदीय अनुसन्धान प्रतिवेदनले आत्महत्याका विभिन्न कारणहरु भएको बताएको छ । जसमा तनाव र परिवारसँग छुट्टिएर बस्नु पर्ने बाध्यता, सन् २०१५ को जनवरीबाट सुरु भएको आतंककारी हमलाकाक्रममा कामको अत्यधिक बोझ, अत्यधिक हिंसा, एलो भेस्ट मुभमेन्टद्वारा थप आर्थिक तथा सामाजिक न्यायको माग गर्दै नोभेम्बरदेखि सुरू भएको सरकार विरोधी आन्दोलनलगायतका कारण रहेको उल्लेख छ । तर, प्रतिवेदनले कुनै यही नै कारण भनेर किटान भने गरेको छैन ।
गत वर्षको संसदको प्रतिवेदन अनुसार फ्रान्सको जनसंख्याको तुलनामा फ्रान्स प्रहरीको आत्महत्याको दर ३६ प्रतिशत बढी छ ।
विभिन्न हिंसात्मक गतिविधिसँग जुध्ने क्रममा मनोवैज्ञानिक आघात पनि आत्महत्याको कारक हुनसक्ने संसदले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रहरीतर्फका मनोवैज्ञानिक कथरिन पिनसनले सुझाएका छन् ।
प्रहरीको आत्महत्या विश्वभरका मुलुकमा भए पनि फ्रान्समा यो दर उच्च छ । अमेरिकामा प्रहरीको संख्या फ्रान्सकोभन्दा पाँच गुणा बढी छ । प्रहरी आत्महत्याको नियन्त्रणमा काम गरिरहेको मासाचुसेट्सस्थि ब्लू हेल्पले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार सन् २‍०१८ मा १६७ जना प्रहरीले आत्महत्या गरेका थिए भने यस वर्ष १११ जना आत्महत्या गरेका छन् ।
युरोपीयन मुलुक इटालीमा फ्रान्सकोभन्दा कम जनसंख्या छ । त्यहाँ यस वर्ष ३१ प्रहरीले आत्महत्या गरेका छन् भने सन् २०१५ देखि सन् २०१७ सम्म २१ देखि २३ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् ।
अमेरिकामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या एक लाख नाघ्यो
भुल्केका सबै संक्रमित कोरोना जितेर घर फर्किए, आजदेखि सील खुकुलो पारियो
बिहानैदेखि देशभर मौसम बदली, वर्षाको सम्भावना
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिद्वारा २४१ जनाको कैद सजाय मिनाहा
पाँच दिनदेखि भारतको ओढारमा तीन सय नेपाली अलपत्र
बेलायतमा कोरोनाबाट थप एक भूपू गोरखा सैनिकको मृत्यु